Saameynta Xagjirnimada bulshada Dhageyso – Radio Muqdisho
Xag-jirnimadu waa in qof ama kooxi ku talax tagto waxa ay rumeysan tahay,ilaa heer ay wax yeello ku keento bulsho meel ku wada nool ama dadka rumeysan naftooda.
Xag-jirnimadu way noocyo badan tahay, sidaas oo kale ayayna u yeelataa saameyn bulsho, dhaqan, dhaqaale iyo ammaanba.
Islaamku aad uga dayriyay ugana digay xag-jirnimda diineed, wuxuuna meelo badan kaga hadlay caaqibo xumada ku talax tagga iyo six un u adeegsiga diinta.
Saameynta xagjirnimadu ku leedahay bulshada iyo mowqifka Islaamka ee arrintaas ku aaddan, waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijkeenna Tubta Toosan oo uu marti noogu yahay Sheikh Cabdullaahi Axmed Garruun oo ka mid ah culimada soomaaliyeed.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir oo Nairobi Kula Kulmay dhiggiisa Dalka Kenya “sawirro”
In ka badan 20 qof oo maanta ku dhimatay shil tareen oo ka dhacay dalka India